Izindaba - Kungani Kufanele Ukhethe US
Siyathembisa, isilinganiso esifanelekayo semikhiqizo singu-100%, kanti isikhathi sewaranti siyiminyaka engu-3. Thobela inkontileka futhi ufeze ngobuqotho imigomo yenkontileka: ukulethwa okufika ngesikhathi, isaziso esifike ngesikhathi sokulethwa kwezimpahla kwelinye iqembu; ukwaziswa kwensizakalo, ume njalo ebangeni eliphakeme lokufunwa komsebenzisi, setha ukubonisana ngezinsizakalo zezulu zonke; Abasebenzi benkampani yethu ekwanelisekeni kwamakhasimende njengombandela, ikhasimende lihlala lilungile, isevisi ingcono kuphela, akukho okungcono kakhulu, insizakalo ayikwazi ukubuyela emuva; Yenza umsebenzi omuhle wokubuya kwamakhasimende ngesikhathi, cela imibono yamakhasimende, uthuthukise imininingwane yomkhiqizo, futhi uphendule ngenkuthalo uphinde uphakamise izixazululo ezinkingeni ezahlukahlukene eziphakanyiswe amakhasimende, ukuze kulungiswe izinkinga ngesikhathi esifanele kuze kube yilapho amakhasimende anelisekile.
Inqubo yokuhlola ezishintshayo:
Zonke izivivinyo ezibucayi zizenzakalelayo ngokuphelele.Okungagcini nje ngokuthuthukisa ukusebenza kahle komsebenzi, kodwa futhi kuqinisekisa nabasebenzi.
Ozakwethu bomhlaba jikelele:
Izinkampani eziningi ezidumile zithanda igridi yesiteji
I-Idea yebhizinisi yeNkampani:
Sesha imakethe ngokuya ngekhwalithi, funa intuthuko ngokwethembeka; thola ubuchwepheshe obusha nobuchwepheshe obuphambili emhlabeni, usungule ubambiswano phakathi kwezinkampani, udale isihloko esiholayo; yenza isu lezigidigidi zomcebo, ukuze ugqame futhi ube phambili, i-buck yobukhulu ngokwesimo semakethe Inkampani, ukunqoba ukwethenjwa kweqembu labasebenzi abazinikele ngamandla, ubuhlakani nokusebenza kahle, kuthuthukisa ikhwalithi ephezulu kanye nensizakalo ephezulu nebhizinisi elijwayelekile.
Isekelwe ngekhwalithi enhle kakhulu, ikhono lokuklama nolwazi lokukhiqiza, inzuzo yentengo yokuncintisana, Sithengise izimpahla e-Asia, eYurophu, eMelika, eMpumalanga Ephakathi nase-Afrika, ect, emazweni angaphezu kuka-60 nezindawo.
Uma unesithakazelo kumikhiqizo yethu, sicela uxhumane nathi ngokushesha ngangokunokwenzeka !!!
I-TeL: (86) 311-82232877 / (86) 13932102798
Ikhodi yeposi: 050200